သူဟာ သငျ့ရဲ့အပျေါယံရုပျရညျသှငျပွငျကိုသာ မကျမောတာဖွဈကွောငျးပွသနတေဲ့အခကျြတှေ…. - Myanmar Express
သူဟာ သငျ့ရဲ့အပျေါယံရုပျရညျသှငျပွငျကိုသာ မကျမောတာဖွဈကွောငျးပွသနတေဲ့အခကျြတှေ….
June 30, 2020 By Myanmar Express in အချစ်ဆိုင်ရာ No Comments Tags: ခဈြသူ, အဝတျအစား
့ကိုယျအခုတှဲနတေဲ့ခဈြသူရညျးစားက ကိုယျလှလို့ခဈြနတောလား ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့စိတျရော လူရော တကယျခဈြတာလား?နှဈခုလုံးလှလို့ခဈြတာဆိုရငျတော့ သိပျပွီးကိစ်စမရှိပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အပျေါယံရုပျအလှကိုပဲ မကျပွီး ခဈြတာဆိုရငျတော့ နညျးနညျးလေးတှေးဖို့လိုပါပွီ။ကိုယျက အခဈြစဈကိုလိုခငျြတာမဟုတျလား။ဒီတော့ ဘယျလိုအခကျြတှကေ သူကိုယျ့ရဲ့အပျေါယံရုပျအလှကိုသာမကျမောကွောငျးပွနလေဲ….ဆကျပွီးဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး။
သူက သငျ့ကို အမွဲတမျးအလှဆုံးဖွဈနစေခေငျြတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘယျလိုပုံစံလေးဝတျ၊ဘယျလိုအကြီမြိုးလေးဝတျဆိုပွီး အမွတမျးအကွံပေးနမေယျ။ကိုယျ့ခဈြသူကိုလှစခေငျြတာကတော့ ယောကျြားလေးတိုငျးပေါ့။ဒါပမေဲ့ လိုအပျတာထကျပိုနရေငျတော့လညျး ဒါကွီးက အတျောလေးစိတျကသိကအောကျဖွဈစရာပါ။သူနဲ့တဈခါတှဖေို့အပွငျထှကျတိုငျး မငျးသမီးတဈပါးလိုပွငျဆငျနရေတော့မှာအမှနျပါပဲ။
*သငျ မလှမပဝတျလာရငျ ပှစိပှစိနဲ့ပွောဆိုနမေယျ
သူက ကိုယျ့ရဲ့အပျေါယံရုပျအလှကိုသဘောကတြာလား။ကိုယျမို့လို့သဘောကတြာလားဆိုတာ အဝတျအစားဖကျရှငျဒီဇိုငျးပျေါသူဘယျလိုအာရုံစိုကျလဲဆိုတာသတိထားကွညျ့ကွညျ့ပါ။တကယျလို့ အဝတျအစားကွီးကပုံတုံးနရေငျ၊ဟောငျးနရေငျ သငျ့ကိုအပွဈတငျပွီး နောကျတဈခါလှလှပပဝတျဖို့တောကျလြှောကျပွောနတေယျဆိုရငျတော့ သူက သငျ့ရဲ့အပျေါယံရုပျအလှကိုပဲ သဘောကတြာသခြောနပေါပွီ။ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူက တကယျတမျးကိုယျဘာဝတျဝတျ သူတို့မကျြစိထဲမှာလှနမှောပါ။
သူအခြောအလှလေးကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျပေါ့။ကနြေပျပီတဖွဈနတော။တကယျတမျးကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူက တဈခွားကောငျလေးက လာကွညျ့ရငျ တအားသဝနျတိုတတျပွီး နောကျဆို ဒီလိုလှအောငျမဝတျနဲ့ဆိုပွီးတောငျပွောကွတာပါ။ဟုတျတယျဟုတျ!
ဟိုကောငျမလေးကိုကွညျ့စမျး။ဘယျလိုဝတျထားလို့ခဈြစရာလေး၊ဟိုမငျးသမီးလိုဝတျ၊အဲ့ဒါဆိုပိုပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိမှာ၊ဆံပငျပုံလေးပွောငျးလိုကျပါလား ပိုလှသှားအောငျစသဖွငျ့ နှဈယောကျအတူဆုံခြိနျမှာတောငျ မရိုးနိုငျပဲ ကိုယျ့ရဲ့လှပမှုနဲ့ပတျသကျပွီး အကွံပေ
းနမေယျ။သူပွောသလို မလုပျရငျစိတျဆိုးမယျ။အဲ့လိုမြိုးဆိုရငျတော့ သငျ့ခဈြသူက သူကိုယျတိုငျအလှအပရေးရာကိုစိတျဝငျစားနတောဖွဈရငျဖွဈ မဟုတျရငျ သငျ့ရဲ့ အပျေါယံရုပျအလှကိုပဲ မကျမောတာကွောငျ့ အမွဲတမျးလှနတေဲ့ပုံစံပဲမွငျခငျြနတောပါ။
ကိုယျကသာ စားခငျြတာစား၊သောကျခငျြတာသောကျမယျ။သူကတော့ ကိုယျဝိတျတကျလာမှာစိုးလို့ ဘေးကတတှတျတှတျလိုကျတားနမေယျ။ဝိတျတကျလာတာနဲ့ခကျြခငျြးခခြိုငျးမယျ။အတငျးအားကစားလုပျဖို့တိုကျတှနျးမယျ။သငျပိနျသှားတဲ့အခါမှာတော့ သူက ကနြေပျနမေယျ။သငျ့ကနျြးမာရေးကိုတောငျဂရုမစိုကျပဲ အတငျးပိနျအောငျလုပျခိုငျးနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ဒီအခဈြရေးကို ပွနျစဉျးစားဖို့လိုနပေါပွီ။
တကယျလို့မြားသငျတို့ရဲ့အခဈြရေးမှာ သငျ့အပျေါအကောငျးမွငျတဲ့အခြိနျက သငျအရမျးလှနတေဲ့အခြိနျပဲဖွဈမယျဆိုရငျ သငျတို့ရဲ့အခဈြရေးကိုပွနျပွီးစဉျးစားသငျ့ပါပွီ။တကယျဆို ကိုယျ့ရဲ့သဘာဝအလှကိုလညျး ခဈြတတျရမယျ၊ကိုယျ့ရဲ့စိတျကိုလညျးခဈြရမယျ။ကိုယျ့ရဲ့ဆန်ဒကိုလညျးလေးစားရမယျမဟုတျလား။အဲ့လိုမဟုတျပဲကွှရေုပျလေးလိုလှနခြေိနျသာ သူက ကိုယျ့အနားမှာရှိနခေငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီအခဈြရေးက ရရှေညျအဆငျပွဖေို့ ဝေးပါတယျ။
ဒီအခကျြတှနေဲ့ထပျတူကနြမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ဒီအခဈြရေးကို ပွနျစဉျးစားသငျ့ပါပွီနျော။
သူဟာ သင့်ရဲ့အပေါ်ယံရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုသာ မက်မောတာဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့အချက်တွေ….
့ကိုယ်အခုတွဲနေတဲ့ချစ်သူရည်းစားက ကိုယ်လှလို့ချစ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စိတ်ရော လူရော တကယ်ချစ်တာလား?နှစ်ခုလုံးလှလို့ချစ်တာဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အပေါ်ယံရုပ်အလှကိုပဲ မက်ပြီး ချစ်တာဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေးတွေးဖို့လိုပါပြီ။ကိုယ်က အချစ်စစ်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်လား။ဒီတော့ ဘယ်လိုအချက်တွေက သူကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ယံရုပ်အလှကိုသာမက်မောကြောင်းပြနေလဲ….ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
သူက သင့်ကို အမြဲတမ်းအလှဆုံးဖြစ်နေစေချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပုံစံလေးဝတ်၊ဘယ်လိုအကျီမျိုးလေးဝတ်ဆိုပြီး အမြတမ်းအကြံပေးနေမယ်။ကိုယ့်ချစ်သူကိုလှစေချင်တာကတော့ ယောက်ျားလေးတိုင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ လိုအပ်တာထက်ပိုနေရင်တော့လည်း ဒါကြီးက အတော်လေးစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာပါ။သူနဲ့တစ်ခါတွေ့ဖို့အပြင်ထွက်တိုင်း မင်းသမီးတစ်ပါးလိုပြင်ဆင်နေရတော့မှာအမှန်ပါပဲ။
*သင် မလှမပဝတ်လာရင် ပွစိပွစိနဲ့ပြောဆိုနေမယ်
သူက ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ယံရုပ်အလှကိုသဘောကျတာလား။ကိုယ်မို့လို့သဘောကျတာလားဆိုတာ အဝတ်အစားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပေါ်သူဘယ်လိုအာရုံစိုက်လဲဆိုတာသတိထားကြည့်ကြည့်ပါ။တကယ်လို့ အဝတ်အစားကြီးကပုံတုံးနေရင်၊ဟောင်းနေရင် သင့်ကိုအပြစ်တင်ပြီး နောက်တစ်ခါလှလှပပဝတ်ဖို့တောက်လျှောက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ သူက သင့်ရဲ့အပေါ်ယံရုပ်အလှကိုပဲ သဘောကျတာသေချာနေပါပြီ။ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူက တကယ်တမ်းကိုယ်ဘာဝတ်ဝတ် သူတို့မျက်စိထဲမှာလှနေမှာပါ။
သူအချောအလှလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ပေါ့။ကျေနပ်ပီတဖြစ်နေတာ။တကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူက တစ်ခြားကောင်လေးက လာကြည့်ရင် တအားသဝန်တိုတတ်ပြီး နောက်ဆို ဒီလိုလှအောင်မဝတ်နဲ့ဆိုပြီးတောင်ပြောကြတာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်!
ဟိုကောင်မလေးကိုကြည့်စမ်း။ဘယ်လိုဝတ်ထားလို့ချစ်စရာလေး၊ဟိုမင်းသမီးလိုဝတ်၊အဲ့ဒါဆိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိမှာ၊ဆံပင်ပုံလေးပြောင်းလိုက်ပါလား ပိုလှသွားအောင်စသဖြင့် နှစ်ယောက်အတူဆုံချိန်မှာတောင် မရိုးနိုင်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့လှပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပေ
းနေမယ်။သူပြောသလို မလုပ်ရင်စိတ်ဆိုးမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူက သူကိုယ်တိုင်အလှအပရေးရာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ် မဟုတ်ရင် သင့်ရဲ့ အပေါ်ယံရုပ်အလှကိုပဲ မက်မောတာကြောင့် အမြဲတမ်းလှနေတဲ့ပုံစံပဲမြင်ချင်နေတာပါ။
ကိုယ်ကသာ စားချင်တာစား၊သောက်ချင်တာသောက်မယ်။သူကတော့ ကိုယ်ဝိတ်တက်လာမှာစိုးလို့ ဘေးကတတွတ်တွတ်လိုက်တားနေမယ်။ဝိတ်တက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းချခိုင်းမယ်။အတင်းအားကစားလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမယ်။သင်ပိန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူက ကျေနပ်နေမယ်။သင့်ကျန်းမာရေးကိုတောင်ဂရုမစိုက်ပဲ အတင်းပိန်အောင်လုပ်ခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ဒီအချစ်ရေးကို ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုနေပါပြီ။
တကယ်လို့များသင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးမှာ သင့်အပေါ်အကောင်းမြင်တဲ့အချိန်က သင်အရမ်းလှနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားသင့်ပါပြီ။တကယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအလှကိုလည်း ချစ်တတ်ရမယ်၊ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းချစ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းလေးစားရမယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကြွေရုပ်လေးလိုလှနေချိန်သာ သူက ကိုယ့်အနားမှာရှိနေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချစ်ရေးက ရေရှည်အဆင်ပြေဖို့ ဝေးပါတယ်။
ဒီအချက်တွေနဲ့ထပ်တူကျနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ဒီအချစ်ရေးကို ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါပြီနော်။
« ကီး(Key) မွငျ့တဲ့သီခငျြးသီဆိုရငျး ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျသှားသောအမြိုးသမီး	» ဝကျခွံကွောငျ့ ကနျြခဲ့တဲ့အမာရှတျတှေ တဈပတျအတှငျးပြောကျကငျးအောငျ
ကီး(Key) မွငျ့တဲ့သီခငျြးသီဆိုရငျး ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျသှားသောအမြိုးသမီး